I-Puerto Rico neVirgin Islands, zonakaliswe ngokuphelele ngemuva kokudlula kweSiphepho uMaria | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ISiphepho uMaria sizokhunjulwa njengesinye sezilimaza kakhulu kule sizini kulo nyaka. Ngemuva kuka-Irma, into ekahle kunazo zonke bekungaba ukuthi kungabe kusaba khona isiphepho, ngoba umonakalo odalwe yiso ubumubi kakhulu. Kepha, okungenani okwamanje, izimo zezulu azikwazi ukulawulwa.
Ngakho-ke, izivunguvungu zasezindaweni ezishisayo zingaba namandla, okuthile ezikwazi ukukwenza ngokushesha okukhulu ngoba izinga lokushisa kwezilwandle landa kuphela. Ngakho-ke, uMaria ngokudabukisayo, ukwazile ukuqhubeka nokubangela izinkinga eziningi eziqhingini zoLwandle lweCaribbean, ikakhulukazi ePuerto Rico naseVirgin Islands.
1 Ukulimala ePuerto Rico
2 Umonakalo eziQhingini zaseVirgin
3 Uyaphi manje?
Ukulimala ePuerto Rico
Isithombe - Hector Retamal / AFP
Ukulimala kwesiphepho uMaria ePuerto Rico. Isithombe - Carlos García / Reuters
Isiphepho uMaria, njengamanje esisogwini olusenyakatho yeDominican Republic, sibe nomthelela omubi kakhulu. Ngomoya wamakhilomitha angama-250 ngehora, lashanela ngokoqobo konke okusendleleni yalo. Ukulahleka kwempahla kube kukhulu kangangokuba, ngokusho kwemeya yedolobha elisogwini lwaseCatañi, "kuzothatha izinyanga, izinyanga eziningi ngaphambi kokuba silulame kulokhu."
Izithombe namavidiyo afika evela lapho ayamangalisa: kususwe izihlahla, kwabhidlizwa izindlu, ukuguguleka kwenhlabathi, imigwaqo egcwele udoti… Namanje izolo, uLwesine, Septhemba 21, lesi siqhingi besisalokhu siqwashisile ngezikhukhula.
Umonakalo eziQhingini zaseVirgin
Iziqhingi zase-Virgin zase-US zenze okufanayo. IMaría ishiye izakhamuzi zayo zingenawo ugesi, futhi imigwaqo seyengahambeki. Kulinganiselwa ukuthi kuze kufike ku-70% wezakhiwo eziseSanta Cruz, idolobha elinabantu abangu-55.000, ezike zalimala.
Zombili lezi zindawo, iPuerto Rico neVirgin Islands, izindawo zenhlekelele sezimenyezelwe yi-White House. Lesi siphepho sibulale okungenani abantu abangu-34, abangu-15 ePuerto Rico, abangu-15 eDominica, abathathu eHaiti noyedwa eGuadeloupe.
Umoya kaMaria, manje oyisiphepho esigabeni 3, Bangashaya iBahamas namhlanje ntambama. Yize ingaba namandla ezinsukwini ezizayo, mancane kakhulu amathuba okuthi izoshaya osebeni lwe-United States.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » IPuerto Rico neVirgin Islands, zacekelwa phansi ngokuphelele ngemuva kokudlula kweSiphepho uMaria